.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: သီတင်းကျွတ်လက်ဆောင် Ning Theme !
သီတင်းကျွတ်လက်ဆောင် Ning Theme !
ဒီနေ့တော့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် သီတင်းကျွတ် လက်ဆောင် Ning Theme လေးတစ်ခု ပေးချင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်သုံးခဲ့သမျှ Theme တွေထဲမှာတော့ အကြိုက်ဆုံးပါပဲဗျာ။ ကုတ်တွေလည်း တော်တော်စုံပါတယ်။
ကျွန်တော် Theme Code တော်တော်များများကို ရောသမမွှေ ပြီး စိတ်ကြိုက်ဖြစ်တဲ့အထိ ကလိထားတာပါ။
အပိုတွေ မပြောတော့ဘူး။ သုံးချင်သူများ ဒီနေရာလေးကို နှိပ်ပြီး ဒေါင်းသွားလိုက်ပါ။
Posted by Thurainlin at 07:42
Labels: Coding, Theme